ဆူညံသံက သင့်ကို ဒုက္ခပေးနေသလား | ဆန်းသစ်မြန်မာ
Home Knowledge ဆူညံသံက သငျ့ကို ဒုက်ခပေးနသေလား
ဆူညံသံက သငျ့ကို ဒုက်ခပေးနသေလား
ဆူညံသံကို အကွာကွီးကွားနရေတာက ကနျြးမာရေးပွဿနာအမြိုးမြိုး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
သငျ့ အိမျထောငျဖကျက ဟောကျတတျသူဖွဈရငျ သငျ့မှာ နှလုံးသှေးကွောဆိုငျရာ ပွဿနာ ဖွဈနိုငျခွမွေငျ့မားပါတယျ။ ဆူညံသံဟာ စိတျဖိစီးမှုနှငျ့ စိတျကသိကအောကျ ဖွဈရခွငျးနဲ ဆကျစပျပွီး နှလုံးသှေးခုနျနှုနျး၊ သှေးဖိအားနှငျ့ သှေးတှငျးအဆီဓာတျကို မွငျ့တကျစတောကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အစတညျးက နှလုံးရောဂါရှိပွီးသူတှေ အနနေဲ့ ဆူညံသံကွောငျ့ နှလုံးခုနျမမှနျခွငျးကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
အခြိနျကွာကွာ ဆူညံသံကွားရတာက နှလုံးရောဂါထခွငျး (Heart Attack)ဖွဈနိုငျခွမြေားပွီး ယာဉျကွောထူထပျတဲ့ ဆူညံသံနဲ့ ညီမြှတဲ့ ၆၇-၇၀ ဒကျဆီဘယျလျဟာ သှေးတိုးခွငျးကို ဖွဈစနေိုငျကွောငျး ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့က ဆိုပါတယျ။ ဘာလငျဆေးရုံကို တကျရောကျခဲ့တဲ့ လူနာတှကေို လလေ့ာမှုအရ အမြိုးသားတှရေဲ့ ၄၅ ရာခိုငျနှုနျးဟာ နှလုံးရောဂါထနိုငျတဲ့ အန်တရာယျရျှိကွောငျး သိရပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ ဆူညံသံတှကွေားမှာ အလုပျလုပျနရေသူဆဆိုရငျ နားကွပျ Ear Plug တပျဆငျထားဖို့လိုအပျပါတယျ။ အားကစားလုပျတဲ့ အခါမှာလညျး ဆူညံသံတှကွေားမှာ လုပျရရငျလညျး နားကို ကာကှယျထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
သငျ့မှာ အကွားအာရုံနဲ့ ပတျသကျပွီး အန်တရာယျရှိနသေလား?
-သငျ့အနနေဲ့ တဈနကေို့ မိနဈ ၃ဝထကျ ပိုပွီး ဆူညံသံထှကျတဲ့ ပစ်စညျးကိရိယာတှနေဲ့အလုပျလုပျနရေရငျ၊
-သငျ့ အနနေဲ့ အလုပျခှငျမှာ အဆကျမပွတျဆူညံသံတှေ ကွားနရေရငျ၊
-ဆူညံသံ ကွားနရေစဉျနဲ့ ကွားပွီးအခြိနျတှမှော နားအူနရေငျ၊
ဒီလိုဖွဈနရေငျတော့ နားနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အကွားအာရုံကောငျး၊ မကောငျး စဈဆေးဖို့လိုလာပါပွီ။
ညအခြိနျမှာ ဆူညံသံကို သတိထားပါ။
ညအခြိနျမှာ ယာဉျကွောထူထပျမှုလိုမြိုး ၅၀ ဒကျစီဘယျလျရဲ့ အထကျ ဆူညံသံ ကွားနရေရငျ နှလုံးသှေးကွောဆိုငျရာ အန်တရာယျကို မွငျ့မားစပေါတယျ။ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြအရ ၃၀ ဒငကျစီဘယျလျကြျောတဲ့ ဆူညံသံကတောငျ အိပျရေးပကျြစပေါတယျ။
သငျ့အိမျမှာ ကနျ့လနျကာ လှငျ့သံ၊ လတေိုကျသံ စတဲ့ ညဘကျ တိတျဆိတျခြိနျမှာ သိသာတဲ့ ဆူညံသံကို ကွားရရငျ အိပျမပြျောတာမြိုးဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ သငျ့ အိမျထောငျဖကျဟာ ဟောကျတတျရငျ သငျ့ အနနေဲ့ နားကွပျ Ear Plug ကို တပျဆငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကယျြလောငျတဲ့ ဟောကျသံဟာ အိပျရေးပကျြစရေုံမက နှလုံးသှေးကွောရောဂါ အန်တရာယျကိုပါ မွငျ့တကျစတောကွောငျ့ပါ။ လနျဒနျကောလိပျရဲ့ လလေ့ာမှုတဈရပျအရ အိပျတဲ့အခါ ဟောကျတတျသူတှဟော သှေးတိုးနိုငျခြေ မွငျ့မားကွောငျးသိရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဟောကျတတျသူတှဟော နှလုံးသှေးကွောဆိုငျရာ အန်တရာယျတှကေိုပါ မွငျ့တတျစတောကွောငျ့ ဟောကျတတျသူတှအေနနေဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
Zawgyi Font : ဆူညံသံက သင့်ကို ဒုက္ခပေးနေသလား
ဆူညံသံကို အကြာကြီးကြားနေရတာက ကျန်းမာရေးပြဿနာအမျိုးမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့် အိမ်ထောင်ဖက်က ဟောက်တတ်သူဖြစ်ရင် သင့်မှာ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားပါတယ်။ ဆူညံသံဟာ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်ရခြင်းနဲ ဆက်စပ်ပြီး နှလုံးသွေးခုန်နှုန်း၊ သွေးဖိအားနှင့် သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကို မြင့်တက်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစတည်းက နှလုံးရောဂါရှိပြီးသူတွေ အနေနဲ့ ဆူညံသံကြောင့် နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အချိန်ကြာကြာ ဆူညံသံကြားရတာက နှလုံးရောဂါထခြင်း (Heart Attack)ဖြစ်နိုင်ခြေများပြီး ယာဉ်ကြောထူထပ်တဲ့ ဆူညံသံနဲ့ ညီမျှတဲ့ ၆၇-၇၀ ဒက်ဆီဘယ်လ်ဟာ သွေးတိုးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ ဘာလင်ဆေးရုံကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ လူနာတွေကို လေ့လာမှုအရ အမျိုးသားတွေရဲ့ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ နှလုံးရောဂါထနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ဆူညံသံတွေကြားမှာ အလုပ်လုပ်နေရသူဆဆိုရင် နားကြပ် Ear Plug တပ်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အားကစားလုပ်တဲ့ အခါမှာလည်း ဆူညံသံတွေကြားမှာ လုပ်ရရင်လည်း နားကို ကာကွယ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်မှာ အကြားအာရုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန္တရာယ်ရှိနေသလား?
-သင့်အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃ဝထက် ပိုပြီး ဆူညံသံထွက်တဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေရရင်၊
-သင့် အနေနဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ အဆက်မပြတ်ဆူညံသံတွေ ကြားနေရရင်၊
-ဆူညံသံ ကြားနေရစဉ်နဲ့ ကြားပြီးအချိန်တွေမှာ နားအူနေရင်၊
ဒီလိုဖြစ်နေရင်တော့ နားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အကြားအာရုံကောင်း၊ မကောင်း စစ်ဆေးဖို့လိုလာပါပြီ။
ညအချိန်မှာ ဆူညံသံကို သတိထားပါ။
ညအချိန်မှာ ယာဉ်ကြောထူထပ်မှုလိုမျိုး ၅၀ ဒက်စီဘယ်လ်ရဲ့ အထက် ဆူညံသံ ကြားနေရရင် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကို မြင့်မားစေပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ၃၀ ဒငက်စီဘယ်လ်ကျော်တဲ့ ဆူညံသံကတောင် အိပ်ရေးပျက်စေပါတယ်။
သင့်အိမ်မှာ ကန့်လန်ကာ လွင့်သံ၊ လေတိုက်သံ စတဲ့ ညဘက် တိတ်ဆိတ်ချိန်မှာ သိသာတဲ့ ဆူညံသံကို ကြားရရင် အိပ်မပျော်တာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့် အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ ဟောက်တတ်ရင် သင့် အနေနဲ့ နားကြပ် Ear Plug ကို တပ်ဆင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျယ်လောင်တဲ့ ဟောက်သံဟာ အိပ်ရေးပျက်စေရုံမက နှလုံးသွေးကြောရောဂါ အန္တရာယ်ကိုပါ မြင့်တက်စေတာကြောင့်ပါ။ လန်ဒန်ကောလိပ်ရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ အိပ်တဲ့အခါ ဟောက်တတ်သူတွေဟာ သွေးတိုးနိုင်ချေ မြင့်မားကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟောက်တတ်သူတွေဟာ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ အန္တရာယ်တွေကိုပါ မြင့်တတ်စေတာကြောင့် ဟောက်တတ်သူတွေအနေနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Previous article Apple မှ Home Button မပါသော iPad အသဈတဈမြိုး မိတျဆကျရောငျးခဖြှယျရှိ
Next article အခှံမာသီး စားသုံးခွငျးက ကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးညှိပေးနိုငျ